NTFS မှ FAT32 ကနေ FILE SYSTEM ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? - WINDOWS ကိုပိုကောင်းအောင် - 2019
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင် drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုမပျက်မယွင်းဆက်လက်တည်ရှိမည့်အရာ, ထိုနည်းတူ NTFS, ရန် FAT32 ဖိုင် system ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမည်!
ကျွန်တော်တို့ကိုသစ်တစ်ခု file system ကိုပေးတော်မူမည်အဘယ်အရာကိုသတ်မှတ်စတင်, ဘာကွောငျ့လဲရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်အတွက်ရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို DVD disc ကို၏ပုံရိပ်ကိုအဖြစ်,4GB ကိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုဆိုပါစို့။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုမကြလိမ့်မည်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ဖို့ disk ကိုတစ်ဖိုင်ကိုချွေတာသည့်အခါသင် FAT32 ဖိုင်စနစ်က 4GB ကျော်ဖိုင်အရွယ်အစားကိုထောကျပံ့မသင့်သော bug ကိုပျံသန်းပါလိမ့်မယ်။
NTFS ၏နောက်ထပ်အားသာချက်ကတစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်အသီးသီး, (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Windows အရှိန်အကြောင်းကိုဆောင်းပါး၌ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုသော) defragment ချင်မှအများကြီးလျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင်းဖြစ်တယ်, ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်မပါဘဲ: အ file system ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, သငျသညျနှစျခုနည်းလမ်းများနှုနျးနိုငျသညျ။ နှစ်ဦးစလုံးမှာကြည့်ပါ။
အဆိုပါ hard disk ကို format လုပ်ပြီးနောက် 1.
ဤသူသည်သင်တို့ပြုနိုင်သည်အရိုးရှင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ disc ကိုအဘယ်သူမျှမဒေတာရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်မလိုအပ်လျှင်လျှင်၎င်းသည် format နဲ့ရန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
သင့် hard disk ပေါ်မှာ right-click လုပ်ပြီး Format ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "My Computer ကို" သွားပါ။ ထို့ပြင်သူကဥပမာ, format တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့ NTFS နေဆဲဖြစ်သည်။
NTFS 2.Konvertirovanie မှ FAT32 ဖိုင်စနစ်က
ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဖိုင်တွေမဆိုအရှုံးမရှိဘဲဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပါသည် ထိုသူအပေါင်းတို့သည် disc ကိုအပေါ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်စနစ်ကပြောင်း, သင်သည်မည်သည့် software ကို install လုပ်မရနိုငျသညျ, အများဆုံးက Windows ကိုဆိုလိုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦး command prompt ကိုစတင်အကြောင်းကိုအောက်ပါလိုင်းရိုက်ထည့်:
convert c: / FS: NTFS
ဘယ်မှာကို C - ထိုအဖြစ်ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်သော disk ကိုဖြစ်ပြီး, FS: NTFS - ထို disk ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်သည့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်စနစ်။
အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးသနည်းမည်သို့ပင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ရှိသမျှကိုသင်၏အရေးကြီးသောဒေတာ! အဘယ်အရာကိုတချို့ပျက်ကွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုးအလေ့အထရှိပါတယ်တူညီလျှပ်စစ်မီးလျှင်။ Plus အားဒီတော့ထွက်ကြောင်း software ကိုအမှားအယွင်းများမှ add နှင့်။
စကားမစပ်! ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေ။ FAT32 ကနေ NTFS မှပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးရုရှားအမည်များဖိုင်များကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နဂိုအတိုင်းခဲ့ကြသည်သူတို့သုံးနိုငျသော်လည်း "kryakozabry" ဟုအမည်ပြောင်းပြီ။
ရုံပွင့်လင်းသူတို့ကိုဖှဲ့နှင့်အတော်လေးအချိန်စားသုံးဖြစ်ပါတယ်အမည်ပြောင်းခဲ့! ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွန်ဆန့်နိုင်ပါသည်အချိန်အားဖြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50-100gb disc ကို, ကအကြောင်း2နာရီကိုယူ) ။